Tag: fanentanana amin'ny marika | Martech Zone
Tag: fanentanana amin'ny marika
Alatsinainy Aprily 22, 2019 Alatsinainy Aprily 22, 2019 Douglas Karr
Rehefa lasa marenina ny mpanjifa amin'ny varotra fanelingelenana, tsy maintsy ilaina ny mamantatra ireo mpisolo vava azy ireo ary manome azy ireo fitaovana ilaina hanampiana amin'ny famerenana ireo vokatra sy serivisiny. Ny sehatra marketing an'ny Extole dia mamorona programa fisoloan-tena miaro ny marika lehibe indrindra. Fizarana amin'ny marika Mamorona traikefa fizarana mpisolo vava tsy misy ezaka. Ny fandaharam-pizarana referansa natao ho an'ny marikao dia hampivadika ny mpanjifanao bebe kokoa ho mpisolo vava ary hampitombo ny fahatsiarovan-marika. Extole dia manome rindrambaiko marketing amin'ny referral
Alakamisy 9 martsa 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa jereko ny folo taona lasa teo amin'ny mpanjifan'ny masoivohontsika dia maro ny mpanjifa no tonga ary lasa izay nihaona tsy nahy tamin'ny alàlan'ny ezaka ara-barotra anatiny. Na izany aza, ny fototry ny orinasanay dia ny marketing am-bava avy amin'ireo mpanjifa novokarinay nandritra ny taona maro. Raha ny marina, ny tolo-kevitra telo izay iasantsika amin'izao fotoana izao dia mifandraika mivantana amin'ireo mpanjifa teo aloha izay niara-niasa taminay. Tsy mahagaga raha mpiaro ny marika
Efa nanoratra sy niresaka betsaka momba ny fanomezam-pahefana sy ny fanapaha-kevitra momba ny fividianana mifandraika amin'ny famokarana atiny izahay. Ny fanekena ny marika dia mitana andraikitra lehibe; angamba mihoatra ny noeritreretinao! Rehefa manohy manangana fahatsiarovan-tena amin'ny marikao amin'ny Internet ianao, dia tadidio fa - na dia mety tsy hitarika fiovam-po avy hatrany aza ny atiny, dia mety hiteraka fanekena marika izany. Rehefa mihabe ny fisianao ary lasa loharano azo itokisana ny marikao,